Archives maka May 29, 2021
by on Nwere ike 29, 2021
Bụ WordPress Kpụrụ siri ike nghọta?
N'etiti ihe ndị dị mkpa nke na-egosi iwepụ ndị mmadụ n'otu n'otu jiri ngwa ngwanrọ WordPress n'onwe ha website (kama nke akwadoro WordPress blog Weebụsaịtị) bụ ọrụaka nke usoro ahụ gụnyere ụdị WordPress na ndebiri ndebiri. Enwere ọtụtụ okwu gbasara koodu, PHP, CSS na ọtụtụ ndebiri ndị ọzọ dị mgbagwoju anya nke na-apụtaghị ọtụtụ mmadụ! Nke a na-ewute, dị ka WordPress blog saịtị nwere ike ime ka ndị a nnukwu mmetụta na weebụsaịtị, na pụrụ ọbụna tinye n'ọrụ dị ka a standalone saịtị ozugbo ị ga-esi na ngalaba gị na nnabata chọpụta.
Reghọta usoro WordPress na-arụ ọrụ, ịtọlite ​​ngwa ngwanrọ, yana ịchọpụta etu ndebiri ndebanye si adaba n'ụdị chọrọ obere ihe ọmụma. Ọ naghị esiri ike dịka ọ na-apụta na mbụ, ozi ọma ahụ bụ, maka ndị ahụ nwere nsogbu aka na teknụzụ, enwere ụfọdụ ntuziaka na akụrụngwa pụrụ iche nwere ike inye aka mee ka usoro ahụ dịkwuo nro.
Ihe ndebiri ndebiri nke WordPress bụ ntọala nke ụdị eji eme ihe iji zụlite peeji nke saịtị WordPress. WordPress ndebiri ndebiri bụ n'ozuzu nanị ọtụtụ faịlụ na ọnụ mejupụtara ụdị maka ebe nrụọrụ weebụ WordPress gị.
Index.php– nke a bụ isi imepụta template na-etinye maka ebe nrụọrụ weebụ WordPress gị
 header.php– nkụnye eji isi mee nhazi
 footer.php– ihe nrụpụta nrụnye ụkwụ
 page.php– maka imepụta ibe WordPress
 single.php– maka imepụta WordPress posts
Sidebar.php– na WordPress blog saịtị na peeji nke igodo
Style.css– na stylesheet nke mejupụtara imewe maka WordPress blog saịtị.
Ndị a bụ nanị ihe ndị bụ isi; enwere otutu ndebiri ndebiri nke WordPress nke enwere ike inye aka iji dozie saịtị blọgụ gị; dịka ọmụmaatụ, njikọ, ụdị ọchụchọ, akwụkwọ ndekọ na okwu saịtị WordPress.
Ha bụkarị koodu ntakịrị iji nyere aka ndebiri ndebiri nke WordPress iji rụọ ọrụ ha n'ụzọ ziri ezi. The mkpado n'ime imewe ndebiri iso nke ntụziaka na-eme ka gị WordPress blog saịtị a nkà mepụtara set nke peeji nke!
N'etiti akụkụ dị egwu nke ndebiri ndebiri nke WordPress bụ na ị nwere ike ịhazi ha ka ha mepụta ibe saịtị saịtị na mgbakwunye na ibe peeji. Ihe ndebiri ndebiri akọwapụtara ga-ejikarị peeji niile dị na saịtị blọọgụ WordPress gị, agbanyeghị ịnwere ike ịgụnye, wepu ma ọ bụ gbanwee faịlụ imepụta ihe ndị ọzọ iji mepụta ngwaahịa pụrụ iche na ibe ọ bụla.
Nwere ike ịmalite ịmalite ịghọta otú ha si arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta saịtị WordPress ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ndebiri ndebiri nke WordPress dị ka usoro nke ụdị.
Otu n'ime ihe ndị na-egosi na ha na-etinye ndị mmadụ n'otu n'otu na-eji ngwa ngwanrọ WordPress na weebụsaịtị ha (ma ọ bụghị na ebe nrụọrụ weebụ WordPress kwadoro) bụ akụkụ ọrụaka nke usoro ahụ gụnyere ụdị WordPress na ndebiri ndebiri. Ihe ndebiri ndebiri nke WordPress bụ ntọala nke ụdị eji eme ihe iji zụlite peeji nke saịtị WordPress. Styles na-abịa n'ụzọ niile ụdị na ụdị, enwere ike ịhazi ya site na imezi atụmatụ ahụ, ịtọlite ​​WordPress plugins yana site na itinye ma ọ bụ ịgbanwe ndebiri imewe. WordPress imewe ndebiri bụ nnoo nanị a otutu faịlụ na ọnụ-eme ka ụdị nke gị WordPress blog website. The mkpado n'ime imewe ndebiri iso nke ụkpụrụ nduzi na-eme ka gị WordPress blog saịtị a nkà kere set nke peeji nke!